Izindaba - Ziyini izinzuzo nezinkinga ngendwangu ye-polyester
Yiziphi izinzuzo nezinkinga zendwangu ye-polyester
I. Izinzuzo zendwangu ye-polyester:
1. Indwangu ye-Polyester inamandla amakhulu. Amandla we-fiber okuyisisekelo yi-2.6 ~ BAI5.7 cN / Dtex, futhi amandla we-fiber enamandla amakhulu yi-5.6 ~ 8.0cN / Dtex. Ngenxa yempahla yayo ephansi ye-hygroscopic, amandla ayo amanzi namandla omile ngokufanayo ngokufanayo. Amandla alo omthelela aphakeme izikhathi eziphindwe kane kunaleyo yenayiloni futhi iphindwe izikhathi ezingama-20 kunaleyo ye-viscose fiber.
2. Ukunwebeka okukhulu kwendwangu ye-polyester. Imoduli enwebeka ingama-22 ~ 141cN / dtex, iphindwe izikhathi ezi-2 ~ 3 kunaleyo yenayiloni, engenakuqhathaniswa nezinye izindwangu.
3. Indwangu ye-Polyester inokumelana okuhle nokushisa. Kungashiwo ukuthi i-dacron iyindwangu yamakhemikhali yamakhemikhali emelana nokushisa kakhulu. Uma yenziwa ngesiketi esincibilikisiwe, ingagcina izingxoxo kahle ngaphandle koku-ayina okuningi.
Ii. Okubi kwendwangu ye-polyester:
1. ukumuncwa umswakama ompofu, ukumunca umswakama wendwangu ye-polyester, ngakho-ke izingubo ze-polyester zizoba nomuzwa oshisayo, nge-electrostatic elula, ukutheleleka kothuli, umthelela wobuhle nokunethezeka, kepha ngemuva kokuhlanzwa kulula kakhulu futhi kuyisicefe, futhi amandla amanzi cishe awenzi drop, akukho deformation, inomsebenzi omuhle kakhulu wokugqokwa.
2. Impahla yokudaya kabi. Ngoba alukho uhlobo oluthile lokudaya ochungechungeni lwamangqamuzana e-polyester futhi i-polarity incane, ukudaya kunzima kakhulu futhi kulula ukudaya.
I-3, kulula ukukhipha, indwangu ye-polyester ingenye yezinto zokwenziwa ze-fiber, futhi noma nini lapho indwangu yokwenziwa kwe-fiber inendawo yokuphalaza, izimpahla zendwangu ye-polyester esetshenziswa isikhathi esithile zizoba nendawo yokubhoboza.
I-Hangzhou Dro Textile ingumkhiqizi wendwangu we-polyester wezobuchwepheshe. Uyemukelwa ngokubonisana